Galkacyo oo labaddeda shinac xiisad ka aloosantahay. | Degmooyinka
Galkacyo oo labaddeda shinac xiisad ka aloosantahay.
Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo oo xalay uu ka dhacay dagaalka xoogan oo u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan madaxweynaha Mamulka Galmudug iyo iyo Tima kalajeex oo isna ah siyaasi sheeganaya madax tinimada maamulka Galmudug ee Koofurta magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in wali ay taagan tahay xiisad colaadeed.
Wariyayaal ku sugan Koofurta magaalada Gaalkacyo oo lahadlay idaacada Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay taagan tahay xiisad sababi karta in dib uu u qarxo dagaalkii xalay ka dhacay Koofurta Magaalada gaalkacyo oo sababay dhiamasho gaareysa 2 ruux oo geeriyootay iyo 6 ruux oo dhaawacyo uu soo gaaray waxaana 3 kamid dhaawacyada dadkaasi ay yihiin kuwa xaaladooda caafimad laga dayrinayo.
Odayaal iyo waxgarad ka soo jeedaga koofurta magaalada Gaalkacyo ayaa la gu waramayaa in ay wadaan ololo ay ku daminayaan colaada ka tagan magaalada Gaalkacyo ee u dhaxeysa Cabdi qeybdiid iyo Tima kala jeex.
Xiisadaan ayaa waxaa ay ka bilaabatay isqabqabsi madaxtinimada maamulka galmudug oo haatan madaxweyne uu u yahay madaxweyne C/ Qeydiid iyo Siyaasiga Timakala Jeex oo qilaaf u dhexeeya uu marba marka ka dambeysa uu yahay mid sii xoogeysanaya.
Fadlan haddaad talo iyo tusaale aad nagu siya